काभ्रेमा बञ्चरो प्र’हार गरि जेठाजुले गरे बुहारीको ह’त्या ! प्रत्यक्षदर्शी यसो भन्छन् – Sidha Online Post
मुख्य पृष्ठ /Video/काभ्रेमा बञ्चरो प्र’हार गरि जेठाजुले गरे बुहारीको ह’त्या ! प्रत्यक्षदर्शी यसो भन्छन्
काभ्रेपलाञ्चोकस्थित नमोबुद्ध नगरपालिका वडा नं. ८ दाप्चामा आज बिहान आफ्नै जेठाजुले धा’रिलो ह’तियार (बञ्चरो) प्र’हार गरी बुहारीको ह’त्या गरेका छन् । दाप्चाका सुदर्शन अधिकारीले अन्दाजी ३६ वर्षीया कान्छी बुहारी रञ्जना तिमल्सिनालाई बञ्चरोे प्र’हार गरी ह’त्या गरेको स्थानीयले बताएका छन् ।